ပြည်ပကုန်သွယ်မှုသတင်းများ | consumer
ရွှေလီသစ်သီးဈေးအတွင်း မြန်မာသရက်သီးများ ရောင်းချခွင့် ပိတ်ပင်ထားသည့်သတင်းများ ထွက်ပေါ်နေသော်လည်း အမှန်အခြေအနေမှာ ဈေးအတွင်း လူသူများပြားစည်ကားနေခြင်းကြောင့် ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်မည့်အရေးရှိသဖြင့်ကျန်းမာရေးဌာနမှအရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာသရက်သီးများ ယခုနှစ်ရာသီတွင် ပြုစုပျိုးထောင်မှု အားနည်းခဲ့သဖြင့် အပုတ်ရောဂါမလွတ်ကင်း ခြင်းများပါဝင်နေရာ ဝယ်လက်များကတရုတ်ပြည်တွင်းဈေးကွက်များသို့ ပြန်လည်တင်ပို့ရန် ထုပ်ပိုးရာ တွင် အပုတ်အနာဖယ်ရှားပြီး အသန့် ပြန်လည်ထုပ်ပိုးရာ၌ အပုတ်အနာနှင့် အနံ့အသက်မှာ အမြင် မကောင်းဖြစ်နေသဖြင့် ကိုဗစ်မဟုတ်သော အခြားကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုများ ဖြစ်ပွားနိုင်ဖွယ်ရှိနေသဖြင့် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်စေရန် ကျန်းမာရေးဌာနက လက်လီလက်ကား အရောင်းနှင့်သန့်ရှင်းရေး ကြပ် မတ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ အပုတ်အနာရောဂါမလွတ်ကင်းခြင်းများကြောင့် ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း)မှ စိန်တလုံးနှင့်ရွှေဟင်္သာသရက်များ၏ ဈေးကွက်ကို အနည်းအများ ထိခိုက်စေကြောင်း သိရှိရပါသည်။
(ရင်းမြစ်-Myanmar Food Guide မှရရှိသည့်သတင်း)
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံက ပြည်တွင်းဆန်ဈေးကွက်အတွက် ဆန်များတင်သွင်းကြခြင်းဖြင့် ဆန် ဈေးနှုန်းမြင့်မတက်အောင်ထိန်းထားနိုင်ရန် ဆန်တင်သွင်းမှုအပေါ် စည်းကြပ်နေသည့်သွင်းကုန်ခွန် နှုန်းထားများကိုဇွန်လ၂၃ ရက်မှစ၍ အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်ထိဖြတ်တောက်လျှော့ချလိုက်ကြောင်း၊ ဆန်သွင်းကုန်များအပေါ် ယခင်က စုစုပေါင်းသွင်းကုန်ခွန် ၆၂.၅ % စည်းကြပ်ခဲ့ရာမှ ယခု ၂၅% သို့ လျှော့ချပြဌာန်းပေးလိုက်သည်ဟု အမျိုးသားအခွန်များဘုတ်အဖွဲ့(NBR)က ပြောကြားခဲ့ကြောင်း၊ ဆန်တင်သွင်းမည့် သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် စားနပ်ရိက္ခာဝန်ကြီးဌာန၌ တင်သွင်းမှု တစ်ကြိမ်ချင်းစီအတွက် သွင်းကုန်ပါမစ် လျှောက်ထားရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ စပါးရိတ်သိမ်းမှု အမြင့် ဆုံးရာသီ၌ ဆန် ဈေးတက်နေပြီး စပါးခင်းအများအပြား ရေကြီးမှုကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ ဖြစ် ပေါ်နေရာ ဆန်အမျိုးအစားအားလုံး ဈေးတက်ကုန်ကြောင်း၊Trading Corporation of Bangladesh (TCB)မှ ထုတ်ပြန်သည့်အချက်အလက်များအရ ဆန်အကောင်းစား လက်လီ‌ရောင်းဈေးနှုန်းများမှာ ယခင်လကထက် ၁၄ % မြင့်တက်ပြီး တစ်ကီလိုလျှင် တာကာ ၆၄-၈၀ သို့ရောက်ရှိလာကြောင်း၊ ဆန်ကြမ်းများသည် လက်လီရောင်းဈေး ယခင်လကထက် ၈.၆ % ဈေးတက်ပြီး တစ်ကီလိုလျှင် တာကာ ၄၈-၅၃ သို့ မြင့်တက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
ထိုင်းမှ PT စက်သုံးဆီဆိုင်များတွင် တန်ဖိုးသင့်ထမင်းဟင်းရောင်းမည်
ထမင်းပေါ်၌ ဟင်းကိုပုံပေးပြီး တစ်ခါပြင်တစ်ပွဲလျှင် ၂၅ ဘတ်ဖြင့်ရောင်းချပေးမည့် စီမံကိန်း ကို ဇွန် ၂၇ ရက်၌စတင်မည်ဟုထိုင်းစားသောက်ဆိုင်အသင်း(Thai Restaurant Association-TRA) က ဇွန် ၂၆ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့ရာ လူအများ စားသောက်ကုန်ဈေးနှုန်း မြင့်တက်နေ ခြင်းကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းမှကူညီပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊စီမံကိန်းကိုဘန်ကောက်မြို့နှင့် အနီးတစ်ဝိုက် ရှိ PT ဓါတ်ဆီဆိုင်များ၌ စတင်တာထွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပူး‌ပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများဖြင့် အကောင် အထည်ဖော်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ထိုင်းစားသောက်ဆိုင်အသင်းဥက္ကဋ္ဌက ပြောကြားခဲ့ကြောင်း‌၊စား‌သောက် ဆိုင်များအနေဖြင့်လည်း ကုန်ဈေးနှုန်းတက်နေခြင်းကို ရင်ဆိုင်နေရသည့်အပြင် ချက်ပြုတ်ရေး၌ သုံးစွဲသည့် ဂတ်စ်မီးဖိုများအတွက် Liquid Petroleum Gas(LPG) ကလည်း ဈေးတက်ကြောင်း၊ ထိုင်းအစိုးရအဖွဲ့၏ ဇွန် ၂၁ ရက် အစည်းအဝေး၌ LPG ဈေးနှုန်းအဆင့်ဆင့် မြင့်တက်ရန် အတည်ပြုခဲ့ကြောင်း၊ ၁၅ ကီလို ဆလင်ဒါကို ၃၆၃ ဘတ်မှ ၄၀၈ ဘတ်သို့ တိုးမြှင့်သတ်မှတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်မှ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်အတွင်း ၃ ကြိမ်တိုင်တိုင်ခွဲ၍ အဆင့်ဆင့်ဈေးကို ဆွဲတင်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
Read more about စီးပွားရေးနှင့်ကုန်သွယ်ရေးသတင်းများ
ထိုင်းအစိုးရက ဗီယက်နမ်နှင့်ပူးပေါင်း၍ ပြည်ပပို့ကုန်ဆန်ဈေးနှုန်းများမြှင့်တင်လိုကြောင်း ပြောကြားခဲ့မှုအား ထိုင်းနိုင်ငံမှဆန်ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များက မဖြစ်နိုင်ဟု ပြောကြားခဲ့ကြောင်း၊ကမ္ဘာ့ ဆန် တင်ပို့မှုတွင် ထိုင်းနိုင်ငံက ဒုတိယအများဆုံး၊ ဗီယက်နမ်က တတိယအများဆုံးဖြစ်သဖြင့် ထိုင်း အစိုးရက ဗီယက်နမ်နှင့်ပူးပေါင်း၍ ကမ္ဘာ့ဆန်ဈေးကွက်၌ အသာစီးရယူကာ ဆန်ဈေးနှုန်းများကို ထိန်းကျောင်းရန် အဆိုပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ဆန်ဈေးနှုန်းများ မြှင့်တင်လိုသည့်အကြောင်းရင်းမှာ လယ်သမားများ စပါးစိုက်ပျိုးရာ၌ ဓါတ်မြေဩဇာအပါအဝင် ကုန်ကျစရိတ်များ သိသာစွာ မြင့်တက် လာနေသောကြောင့် လယ်သမားများ ဝင်ငွေပိုရအောင် စပါးဈေးနှုန်းများကို မြှင့်တင်ပေးရန်ဖြစ်ကြောင်း၊ထိုင်းဆန်ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌက ထိုင်းအစိုးရအနေဖြင့် အသင်းနှင့်ဆွေးနွေး တိုင်ပင်ခြင်းမရှိသေးဟုလည်းကောင်း၊ ထိုင်းနှင့်ဗီယက်နမ်တို့က အများဆုံးတင်ပို့နေသည့်နိုင်ငံများ မဟုတ်ဘဲ နှစ်နိုင်ငံစုစုပေါင်းတင်ပို့မှုက အိန္ဒိယနိုင်ငံတင်ပို့နေခြင်းထက် နည်းပါးသဖြင့် ဈေးတက် လိုက်ပါကဝယ်လက်များက ပြိုင်ဖက်အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်သို့ ရောက်သွားကြလိမ့်မည်ဟုလည်းကောင်း၊ ဆန်ကိုဈေးအတက်စောင့်ရန်ကြာရှည်စွာ သိုလှောင်ထား၍မရဟုလည်းကောင်းပြောကြားခဲ့ကြောင်း၊
ဗီယက်နမ် စားသောက်ကုန်အသင်းဥက္ကဋ္ဌကလည်း ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာ မရေမရာဖြစ်နေချိန်တွင် ဈေးတင်ခြင်းမှာ မသင့်တော်ဟုပြောကြားခဲ့ကြောင်း၊ ထိပ်တန်းဆန်တင်ပို့သူ အိန္ဒိယနိုင်ငံက ကမ္ဘာ့ဆန်တင်ပို့မှု၏ ၄၀%ကိုတင်ပို့လျှက်ရှိရာ ၎င်းဆန်ဈေးနှုန်းမှာပြီးခဲ့သည့်အပတ်၌ ၅ နှစ် တာကာလ အတွင်းအနိမ့်ဆုံးသို့ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း၊အိန္ဒိယနိုင်ငံသုံးငွေနှင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာငွေလဲလှယ်မှုနှုန်း အားပျော့နေသဖြင့် အိန္ဒိယတွင် ဆန်များအလျှံအပယ်ဖြစ်နေရာ အိန္ဒိယဆန် ၅% ဆန်ကွဲပါ ဆန်ဖြူ ၁ တန်ဈေးနှုန်းသည် ဗီယက်နမ်ဆန်ထက် အနည်းဆုံး အမေရိကန်‌ဒေါ်လာ ၅၀ ၊ ထိုင်းဆန်ထက် အမေရိကန်‌ဒေါ်လာ ၁၀၀ သက်သာနေပြီး အိန္ဒိယပါဝင်မှုမရှိဘဲ ဈေးနှုန်းကိုကိုင်တွယ်ပါက အလုပ် မဖြစ်ဟု ထိုင်းဆန်ကုန်သည်များက ပြောကြားခဲ့ကြောင်း၊ အိန္ဒိယဆန်က ဈေးနှုန်း ပိုမို သက်သာနေ သဖြင့် အခြားနိုင်ငံများကဈေးတင်ပါက အိန္ဒိယဘက်သို့ ဆန်ဝယ်လက်များ ရောက်ရှိသွားနိုင်ပြီး ဗီယက်နမ်နှင့်ထိုင်းတို့က ဈေးကွက်ဝေစုနည်းနေ၍ ဈေးကွက်ဝေစုရလာရေး ဆန်ဈေးနှုန်းများ နှိမ့်ချရန်လိုအပ်သည်ဟု မွန်ဘိုင်းအခြေစိုက် ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုမှ ကုန်သည်က ပြောကြားခဲ့ကြောင်း၊ ဟိုချီမင်းစီးတီးမှ ဆန်ကုန်သည်တစ်ဉီးက အိန္ဒိယက ဆန်တင်ပို့မှု ကန့်သတ်လိုက် ပါက ထိုင်းနှင့်ဗီယက်နမ်တို့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုမပါလည်း ဆန်ဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊အမေရိကန်စိုက်ပျိုးရေးဌာနအဆိုအရ ဗီယက်နမ်နှင့်ထိုင်းတို့၏ ကမ္ဘာ့ဆန်တင်ပို့မှုဝေစုမှာ ၂၆% ခန့်သာရှိပြီး ၎င်းနှစ်နိုင်ငံက ဈေးတက်လိုက်ပါက ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံက အကြီးအကျယ်ထိခိုက် မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
အင်ဒိုနီးရှားစားအုန်းဆီ ပြည်ပပို့ကုန်ခွဲတမ်း တန်ချိန် ၂၇၀၀၀၀ ကျော် ပါမစ်ချပေး
အင်ဒိုနီးရှား စားအုန်းဆီ ပြည်ပတင်ပို့ရန် ချထားပေးသည့်ခွဲတမ်းအနေဖြင့် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မေလ(၃)ရက်နေ့ထိ တန်ချိန် (၂၇၅၄၅၄) အား ပို့ကုန်ပါမစ်ထုတ်ပေးထားသည်ဟု ကုန်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန အဆင့်မြင့်အရာရှိက ပြောကြားခဲ့ကြောင်း၊ မေလကုန်ပိုင်းတွင် စားအုန်းဆီတင်ပို့ရန် ပြန်လည်ခွင့်ပြုခဲ့ချိန်မှ သောကြာနေ့အထိ ပို့ကုန်ပါမစ်ထုတ်ပေးထားသည့်ပမာဏဖြစ်ကြောင်း၊ ကုမ္ပဏီ ၂၁ ခု ကို ပါမစ်ချထားပေးခဲ့ပြီး အများစုက ဆီသန့် refined, bleached and deodorized (RBD)palm oil olein တို့ဖြစ်ကြောင်း၊ အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရက စားအုန်းဆီ အမျိုးမျိုးတင်ပို့မှုကို ဧပြီ လ(၂၈)ရက်နေ့တွင် စတင်ပိတ်ပင်ခဲ့ပြီး မေလ(၂၃)ရက်တွင်ဖွင့်ပေးခဲ့ကြောင်း‌ ၊ စားအုန်းဆီအမျိုးမျိုး ထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီများက ပြည်တွင်းဈေးကွက်၌ ရောင်းချမှုပမာဏအနည်းအများအရ ပို့ကုန် ခွဲတမ်းချပေးသည့်စနစ်ကို ပြောင်းလဲကျင့်သုံးကြောင်း‌၊စားအုန်းဆီတန်ချိန် ၁ သန်းကို ခွဲတမ်းချပေးနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း‌၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံက ယခင်ကပုံမှန်အားဖြင့် စားအုန်းဆီအမျိုးမျိုးကို တစ်လလျှင် တန်ချိန် ၂.၅ သန်းတင်ပို့‌ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
အင်ဒိုနီးရှား စားအုန်းဆီပို့ကုန်ပါမစ် မကြန့်ကြာအောင် အရှိန်တင်ဆောင်ရွက်မည်
အင်ဒိုနီးရှားသည် စားအုန်းဆီပြည်ပတင်ပို့မှု ပြန်လည်စတင်ချိန်မှစ၍တန်ချိန် ၃၀၂၀၀၀ ခန့် တင်ပို့ခွင့်ပြုထားသည်ဟု ဝါရင့်ဝန်ကြီးက ဇွန်လ(၅)ရက်နေ့တွင်ပြောကြားခဲ့ကြောင်း၊ ပါမစ်လုပ်ငန်းစဉ်ကို အာဏာပိုင်တို့က အရှိန်တင်လုပ်ဆောင်မည်ဟုလည်း ဆီအုန်းစိုက်ပျိုးသည့်သူများနှင့်ပို့ကုန် လုပ်ငန်းရှင်များကို အဆိုပါဝန်ကြီးကအာမခံခဲ့ကြောင်း၊ ကမ္ဘာ့စားအုန်းဆီအများဆုံးထုတ်လုပ်သည့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံက ဧပြီ ၂၈ ရက်တွင် စားအုန်းဆီတင်ပို့မှုပိတ်ပင်ခြင်းဖြင့် ပြည်တွင်း ဟင်းချက်စား အုန်းဆီဈေးနှုန်းများကျဆင်းလာရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီး မေလ၂၃ ရက်တွင် အစိုးရက စားအုန်းဆီတင်ပို့မှုကို ပြန်လည်ဖွင့်ပေးခဲ့သော်လည်း ပြည်တွင်းဖူလုံမှုသေချာစေရန် အရံအတားပြုပေးသည့်မူဝါဒများကျင့် သုံးခဲ့ကြောင်း၊ပြည်တွင်းဈေးကွက်တာဝန်(DMO)ပြဌာန်းချက်အရ သတ်မှတ်ထားသည့် အချိုးအစား ကို ပြည်တွင်းဈေးကွက်၌ မဖြစ်မနေရောင်းပေးရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ မူဝါဒအပြောင်းအလဲကြောင့် ဌာနဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းကိုင်တွယ်မှုများနှေးကွေးပြီး ပို့ကုန်ပါမစ်ကျရန် ကြန့်ကြာနေသည်ဟု စားအုန်းဆီလုပ်ငန်းစုများနှင့် ကုန်သည်များကပြောကြားကြကြောင်း၊ အင်ဒိုနီးရှား စားအုန်းဆီ မရ သဖြင့် ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်၌ စားအုန်းဆီဈေးတက်လာပြီး မလေးရှားထုတ်လုပ်မှုက အင်ဒိုနီးရှား စားအုန်းဆီကို အပြည့်အဝ အစားထိုးထုတ်လုပ်ရောင်းချပေးနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း၊ အင်ဒိုနီးရှား စားအုန်းဆီအသင်းမှ တာဝန်ခံက ပြည်ပသို့တင်ပို့ခြင်းမပြုသဖြင့် စားအုန်းဆီ ဆီစက်များက လယ် သမားများထံမှ ဆီအုန်းများ ဝယ်ယူခြင်းရပ်ထားသည်ဟု ဇွန်လ ၃ ရက်နေ့တွင်ပြောကြားခဲ့ကြောင်း၊ အင်ဒိုနီးရှားသည် ပုံမှန်အားဖြင့် တစ်လလျှင် စားအုန်းဆီတန်ချိန် ၂.၅ သန်းခန့်တင်ပို့နေပြီး အစိုးရသည် စားအုန်းဆီ ကုမ္ပဏီများကို DMO ပြဌာန်းချက်အရ တစ်လလျှင် ဟင်းချက်ဆီတန်ချိန် ၃၀၀၀၀ ရောင်းချစေမည် ဟုပြောကြားခဲ့ကြောင်း ၊ အင်ဒိုနီးရှား စီးပွားရေးဝန်ကြီးဌာန အရာရှိက အစိုးရသည် ပို့ကုန်ခွန်စည်းကျပ်မှုနှင့် ပတ်သက်သော ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ထားပြီး မကြာမီ ထုတ်ပြန်တော့မည်ဟု ပြောကြားခဲ့ကြောင်း၊အင်ဒိုနီးရှားသည် လက်ရှိတွင် စားအုန်းဆီကြမ်းတင်ပို့မှုအတွက် တစ်တန်လျှင် အမြင့်ဆုံးအခွန် ၃၇၅ ဒေါ်လာ စည်းကြပ်ထားရာ ယခင်က အမြင့်ဆုံး ပို့ကုန်ခွန် တစ်တန်လျှင် ဒေါ်လာ ၂၀၀ ထက်မကျော်စေရဟု သတ်မှတ်ပြဌာန်းထားသည်ထက် ‌ကျော်လွန်နေကြောင်း‌၊ ပြည်တွင်းရောင်းချမှုကို အားပေးရန်ပြည်ပသို့တင်ပို့ရန်အတွက် အများဆုံး အခွန်သတ်မှတ်ချက်ကို တိုးမြှင့်ကောက်ခံခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရက စားအုန်းဆီကြမ်းနှင့်ယင်းထွက်ကုန်များတင်ပို့မှုကို တားမြစ်ပိတ်ပင်ရေး ကြိုးပမ်းနေချိန်တွင် အင်ဒိုနီးရှားသည် အရှေ့တီမောသို့တင်ပို့မည့် အနည်းဆုံးစားသုံးဆီ လီတာ ၈၁၀၀၀ ကို သိမ်းဆည်းခဲ့ကြောင်း၊၂၈-၄-၂၀၂၂ ရက်နေ့က ဂျားဗားကျွန်း၊ ဆူရာဘာရာရှိဆိပ်ကမ်း တစ်ခုတွင် ပို့ကုန်ကြေငြာလွှာ၌ ဟင်းချက်ဆီစာရင်းမပါဘဲ တင်ပို့မည့် ဟင်းချက်ဆီနှင့် အခြားပစ္စည်းများ တင်ဆောင်ထားသည့် သင်္ဘောကွန်တိန်နာ ၈ လုံးထက် မနည်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်ဟု မေလ ၁၂ ရက်နေ့နှောင်းပိုင်းထုတ်ပြန်ချက်၌ ဖော်ပြထားကြောင်း၊ ဟင်းချက်ဆီတင်ပို့မှုတားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါ ထောင်ဒဏ် (၅)နှစ်နှင့် ဒဏ်ငွေ အင်ဒိုနီးရှားရူးပီး ၅ ဘီလီယံ (ဒေါ်လာ ၅၀၀၀၀၀)အထိချမှတ်နိုင်သည်ဟု ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးက ပြောကြားခဲ့ကြောင်း၊
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး စားအုန်းဆီထုတ်လုပ်သည့် အင်ဒိုနီးရှားသည် ပြီးခဲ့သောလ နှောင်းပိုင်းတွင် စားအုန်းဆီကြမ်းနှင့် သန့်စင်ပြီးစားအုန်းဆီထုတ်ကုန်များတင်ပို့မှုကို ရပ်တန့်လိုက်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံအတွင်းရှိ ဟင်းချက်ဆီ ဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်လာမှုကို ထိန်းချုပ်ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြောင်း၊ နေကြာဆီထောက်ပံ့မှု အများအပြားဖယ်ရှားခံလိုက်ရသည့် ယူကရိန်းစစ်ပွဲကြောင့် ရုန်းကန်နေရ‌သော ကမ္ဘာ့ဟင်းသီးဟင်းရွက် ဆီဈေးကွက်များသည် တင်ပို့မှုပိတ်ပင်လိုက်ခြင်းကြောင့် လှုပ်ခတ်သွားခဲ့ရာ စားအုန်းဆီသည် ကမ္ဘာ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီဈေးကွက်၏ ၃ ပုံ ၁ ပုံကျော်ရှိပြီး အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသည် စားအုန်းဆီထောက်ပံ့မှု၏ ၆၀% ခန့်ရှိကြောင်း၊ အင်ဒိုနီးရှားစီးပွားရေးဝန်ကြီးက နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း စားသုံးဆီဈေးနှုန်းများ တစ်လီတာ လျှင် အင်ဒိုနီးရှားရူပီး ၁၄၀၀၀ အထိ ကျဆင်းသွားသည်အထိ တင်ပို့မှုပိတ်ပင်ထားမည်ဟု ပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
သကြားပြည်ပတင်ပို့မှုတန်ချိန် ၁၀ သန်းကန့်သတ်
အိန္ဒိယအစိုးရကပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ်တွင် ဂျုံ ပြည်ပတင်ပို့မှုကို ပိတ်ပင်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ သကြားပြည်ပတင်ပို့မှုကို တန်ချိန် ၁၀ သန်းအထိသာ ကန့်သတ်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ နောက်ထပ် သကြားရာသီစတင်မည့် အောက်တိုဘာလအထိ ပြည်တွင်းသကြားလက်ကျန် အလုံအလောက် ရှိနေသည်မှာသေချာစေရန်အတွက်ဖြစ်ကြောင်း၊ အိန္ဒိယသည်သကြားထုတ်လုပ်မှုတွင် ကမ္ဘာ့အများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီး ဘရာဇီးက ကမ္ဘာ့သကြားတင်ပို့မှု အများဆုံးတင်ပို့သည့်နိုင်ငံဖြစ်ရာ အိန္ဒိယက ဒုတိယ အများဆုံးတင်ပို့သည့်နိုင်ငံဖြစ်ကြောင်း၊ အိန္ဒိယကသကြားအဝယ်များသည့် နိုင်ငံများမှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ အင်ဒိုနီးရှားနှင့် မလေးရှားနိုင်ငံတို့ဖြစ်ကြောင်း၊ အိန္ဒိယတွင် သကြားထုတ်လုပ်မှုယခုရာသီ၌ တန်ချိန် ၃၅ သန်း ထွက်ရှိမည်ဟု မျှော်မှန်းထားပြီး ပြည်တွင်းစားသုံးမှုမှာ နောက်ထပ် ကြံရာသီ မရောက်ခင် အထိတန်ချိန်၂၇ သန်းရှိမည်ဟု အိန္ဒိယသကြားစက်များအသင်းက ခန့်မှန်းထားကြောင်း၊ ယခင်ကြံရာသီ မှ သကြားလက်ကျန် တန်ချိန် ၈.၂ သန်းခန့်ရှိသဖြင့် တန်ချိန် ၁၆ သန်း ပိုကာ တန်ချိန် ၁၀ သန်း တင်ပို့ပြီးပါက နောက်ကြံရာသီအစတွင် တန်ချိန် ၆ သန်း လက်ကျန်ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း‌၊ သကြား ပြည်ပတင်ပို့သည့်ပမာဏ တန်ချိန် ၉ သန်းသို့ ရောက်ရှိသည့်အခါ ကျန်ရှိသည့် တန်ချိန် ၁ သန်း ကို တင်ပို့ရန် ပို့ကုန်ပါမစ်လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သကြား ပို့ကုန်လုပ်ငန်းများသည် ပြီးခဲ့သည့် ကြံရာသီ အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်မှ ယခုအထိ တန်ချိန် ၈.၅ သန်းတင်ပို့ရန် အရောင်းအဝယ် စာချုပ်များ လက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီးဖြစ်ရာ ဧပြီလကုန်ထိ တန်ချိန် ၇.၁ သန်းပေးပို့ပြီး မေလထဲ တွင် တန်ချိန် ၈ သိန်းမှ ၁ သန်းအထိတင်ပို့မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
(ရင်းမြစ်-Myanmar Food Guide မှ ရရှိသည့်သတင်း)
ထိုင်းနှင့်ဗီယက်နမ်တို့သည် ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်တွင် ၎င်းတို့၏ ဈေးညှိနှိုင်းမှု အသာစီးရနေစေရန် စွမ်းအားမြှင့်တင်၍ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သင့်သည်ဟု ဝန်ကြီးချုပ်က ‌ပြောကြားခဲ့ကြောင်း၊ စပါးဈေးနှုန်းများ ကျဆင်းနေချိန်တွင် မြေဩဇာအပါအဝင် စရိတ်စကများ မြင့်မားနေသဖြင့် ရုန်းကန်နေရ‌သော နှစ်နိုင်ငံ၏လူဉီးရေသန်းချီရှိနေသည့်လယ်သမားများအတွက် အကျိုးရှိစေမည့် လုပ်ရပ်ဖြစ်သည်ဟု အစိုးရ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားကြောင်း၊ ထိုသို့အကွက်ရွှေ့ခြင်းသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ စားသုံးသူများအတွက်မှာမူ အစားအသောက်စရိတ်များမြင့်မားလာမည့် အကြောင်းတရားတစ်ခု ဖြစ်နေကြောင်း၊ ဗီယက်နမ် စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ဒု-ဝန်ကြီးက ထိုင်းမှတာဝန်ရှိသူများနှင့် မေလ ၂၆ ရက်တွင် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း၊ ဗီယက်နမ် စားသောက်ကုန်အသင်းဥက္ကဋ္ဌက ထိုင်းနိုင်ငံမှ သက်ဆိုင်သူများနှင့် နောက်လတွင်တွေ့ဆုံပြီး ဆန် ထုတ်လုပ်မှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကို ဆွေးနွေးမည်ဟု မေလ ၂၇ ရက်‌တွင် ပြောကြားခဲ့ပြီး တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမည့်အကြောင်းအရာမှာ ဆန်ဈေးနှုန်းများ ထိန်းချုပ်ရန် သဘောတူညီချက်အတွက် မဟုတ်ဘဲ ရေရှည်တည်တံ့သည့် စားနပ်ရိက္ခာထုတ်လုပ်မှုအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့် အစီအမံများကို အဓိက ထားဆွေးနွေးသွားမည်ဟု ပြောကြားခဲ့ကြောင်း၊ ယူကရိန်းစစ်ပွဲအတွင်း ဆန်မှာလက်ကျန်အလုံအလောက်ရှိနေပြီး ထုတ်လုပ်မှုလည်းများပြားနေ၍ ဆန်ဈေးနှုန်းများ ဈေးအနိမ့်တွင် တည်ငြိမ်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ The Rice Trader မှ CEO နှင့် သုတေသီက စပါးအထွက်များသဖြင့် အလျှံအပယ် ဖြစ်နေရာ ၂၀၂၃ ခုနှစ်အထိ ဆန်ဈေးနှုန်းများ ဆက်လက် နိမ့်ကျနေဉီးမည်ဟု ခန့်မှန်းကြောင်း၊ ပြောင်းဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်နေသဖြင့် တိရစ္ဆာန်အစာအတွက် ပြောင်းအစား ဆန်ကွဲကို အစားထိုးသုံးစွဲလာကြသော်လည်း ဈေးတက်စေလောက်အောင် မများပြားကြောင်း၊ စပါးဈေးနှုန်းများ နိမ့်ကျနေပြီး ဓါတ်မြေဩဇာဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်နေသည့်အတွက် လယ်သမားများက ဓါတ်မြေဩဇာ လျှော့သုံးကြပါက စပါး အထွက်နည်းသွားမည်ဟု သုတေသီကပြောကြားခဲ့ကြောင်း၊ ထိုင်းဆန်ပို့ကုန် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်ဝယ်လိုအား ပြန်ကောင်းလာခြင်း၊ ထိုင်း ဘတ်ငွေလဲနှုန်းတန်ဖိုး ကျဆင်းခြင်းကြောင့် အကျိုးကျေးဇူးရရှိကြပြီး ကမ္ဘာ့ဆန်ဈေးကွက်၌ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်း ပိုကောင်းနေစေကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ကြံတင်သွင်းမှုအတွက် ချောမွေ့စွာအ‌ကောက်ခွန်ရှင်းလင်းနိုင်ရန် အစွမ်းကုန်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိ
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလအစပိုင်းတွင် ရွှေလီမြို့၌ ကိုဗစ် ၁၉ ကပ်ရောဂါအခြေအနေမှာ တစစ တည်ငြိမ်လာသည်နှင့်အမျှ ရွှေလီအကောက်ခွန်ဌာနသည် နယ်စပ်ဂိတ်ပေါက်များတွင် ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးနှင့် အ‌ကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေး ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ရန်နှင့် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ ပြန်လည်စတင်ရန် အဓိကတာဝန်အနေနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း‌၊ တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ်ဒေသရှိ လေယွီလမ်းကြောင်း၏ အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်နေရာများ၏ ကိုဗစ် ၁၉ ကပ်ရောဂါကာကွယ် ထိန်းချုပ်မှု အခြေခံ အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေး အခြေအနေများကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ကွင်းဆင်းလေ့လာစူးစမ်းခဲ့ကြောင်း၊ လေယွီလမ်းကြောင်းသည် ကြံ တင်သွင်းမှုကို ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ရေးကို တရားဝင်ဆောင်ရွက်ပြီးနောက် ရွှေလီအကောက်ခွန်ဌာနသည် အထူးပြတင်းပေါက်နှင့် အစိမ်းရောင်လမ်းကြောင်းကို ဖွင့်လှစ်ထားပြီး ပိုးမွှားရောဂါ ချက်ချင်းစစ်ဆေးခြင်းပုံစံကိုကျင့်သုံးကာ စစ်ဆေးပြီးမှ ခွင့်ပြုပေးခြင်းကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ လေယွီ လမ်းကြောင်းမှတဆင့် ကြံ တင်သွင်းမှုအား‌ချောမွေ့စေရန် အားသွန်ခွန်စိုက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ ကြောင်း၊ မေလ ၂၄ ရက်နေ့ မှစ၍ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးပြီး ခွင့်ပြုပေးသည့် ကြံတင်သွင်းမှု ၁၇၂ သုတ်၊ စစ် ဆေးသည့်ကြံတင်ကား ၇၁၃ စီး၊ ကြံတန်ချိန် စုစု‌ပေါင်း ၂၁၁၀၀ တန်၊ စုစုပေါင်းတန်ဖိုးငွေပမာဏမှာ တရုတ်ယွမ်ငွေ ၉.၇၃၇ သန်းရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်။
ပြည်ပသို့တင်ပို့နေသော ကုန်စည်လိုင်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပဲမျိုးစုံ၊ ဆီထွက်သီးနှံနှင့်စားဆီတို့အား ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန် လိုအပ်သော ကုန်စည်လိုင်းများအဖြစ် သတ်မှတ်ကြောင်းကို ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနက ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မေလ ၂၃ ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြော်ငြာခဲ့သော ပို့ကုန်သွင်းကုန် သတင်းလွှာ၌ဖော်ပြထားကြောင်း၊ ပြည်ပသို့ တင်ပို့သည့်ကုန်စည်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေး စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုကို ကာကွယ်ရေးအစရှိသည့် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန် လိုအပ်သောကုန်စည်လိုင်းများအဖြစ် 2017 Customs Tariff of Myanmar အရ HS Code6digit ဖြင့် ကုန်စည်(၁၂၃၆)လိုင်းကို အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၅၁/၂၀၂၀) နှင့် ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းလွှာ(၃/၂၀၂၂)တို့ဖြင့် ထုတ်ပြန်သတ်မှတ်ထားကြောင်း၊ ယခုအခါ ကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံများနှင့်ချုပ်ဆိုထားသောစာချုပ်များအရ ပြည်ပသို့ စနစ်တကျ တင်ပို့နိုင်ရန်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံတကာ စားသုံးဆီရောင်းလိုအား နည်းခြင်းကြောင့် ပြည်တွင်းဈေးနှုန်းအပေါ် သက်ရောက်မှုလျော့ကျစေရေးနှင့် ပြည်တွင်းစားသုံးဆီဖူလုံစေရေးတို့အတွက် ဆီထွက်သီးနှံနှင့် စားသုံးဆီ တင်ပို့မှုများအား ထိန်းညှိနိုင်ရန်လည်းကောင်း၊ 2017 Customs Tariff of Myanmar အရ ပဲမျိုးစုံအကျုံးဝင်သည့် HS Code6digit ဖြင့် ကုန်စည်(၁၅)လိုင်း(သို့) HS Code 10 digit ဖြင့် ကုန်စည် (၅၃)လိုင်း၊ ဆီထွက်သီးနှံအကျုံးဝင်သည့် HS Code6digit ဖြင့် ကုန်စည်(၁၄)လိုင်း(သို့) HS Code 10 digit ကုန်စည်(၁၈)လိုင်းနှင့် စားဆီအကျုံးဝင်သည့် HS Code6digit ဖြင့် ကုန်စည် (၂၄) လိုင်း(သို့) HS Code 10 digit ဖြင့် ကုန်စည်(၁၁၀)လိုင်း၊ စုစုပေါင်း HS Code 10 digit ဖြင့် ကုန်စည်(၁၈၁)လိုင်းကို ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်သောကုန်စည်လိုင်းများအဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်ကြောင်း၊ ထိုကဲ့သို့ ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်သော ကုန်စည်လိုင်းများအနက် မည်သည့်ကုန်စည်ကိုမဆို ပြည်ပသို့ပင်လယ်ရေကြောင်း၊ လေကြောင်းနှင့် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများမှ တင်ပို့ရာတွင် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ(၁)ရက်နေ့မှစတင်၍ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ပို့ကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရယူပြီးမှသာ တင်ပို့ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြထားကြောင်းသိရှိရပါသည်။
မေလ ၁၆ ရက်မှစ၍ မြန်မာကုန်တင်ယာဉ်များ တရုတ်နိုင်ငံဘက်သို့ ကျင်စန်းကျော့-ဝမ်တိန် ဂိတ်မှ ဝင်ရောက်ထွက်ခွာခွင့်ရရှိလာသောကြောင့် ကုန်သွယ်ရေးပြန်လည်အားကောင်းလာခဲ့ရာ မြန်မာနိုင်ငံက မြန်မာလိုင်စင်ဖြင့်ကားများကို အစားထိုးယာဉ်မောင်းစနစ်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံတွင်းသို့ တိုက်ရိုက်ဝင်ခွင့်ပြုပြီး တရုတ်နိုင်ငံကလည်း တိုက်ရိုက်ထွက်ခွင့်ပြုသည်ဟု မူဆယ်နယ်စပ်ကုန်စည်ဒိုင် အသင်းဥက္ကဋ္ဌ က ပြောကြားခဲ့ကြောင်း၊ ယာဉ်မောင်းမှာ အစားထိုးယာဉ်မောင်းဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံဘက် ကကားများ တိုက်ရိုက်ဝင်ခွင့်ရသဖြင့် စရိတ်ကုန်ကျမှု သက်သာသွားရာ ယခင်ကဆန်အိတ်(၁၀၀၀)လျှင် ကျပ်သိန်း(၁၀၀)ခန့်ကုန်ကျစရိတ်ရှိသော်လည်း ယခုကျပ်(၁၀)သိန်းခန့်သာ ကုန်ကျသဖြင့် ကုန်သည်များလည်း အကျိုးအမြတ်ရှိလာပြီး ကုန်ကားများတန်းစီစောင့်ရခြင်းများမရှိတော့သဖြင့် အဝင်အထွက်လည်း မြန်ဆန်သွားကြောင်း၊ သို့ဖြစ်၍ကျင်စန်းကျော့ကုန်သွယ်ရေးဂိတ်မှာ အားကောင်းတိုးတက်လာမည်ဟု မျှော်လင့်ရပြီး မြန်မာ့ပို့ကုန်များ မော်တော်ယာဉ်အပြောင်းအလဲလုပ်စရာမလိုတော့သော်လည်း တရုတ် နိုင်ငံမှ အစားထိုးယာဉ်မောင်းများဖြင့်သာ မောင်းနှင်ရဉီးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အသီးရောင်းချမည့်ကုန်သည် ပွဲစားများ တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဝမ်တိန်ကွင်းသို့ဝင်ခွင့်ပြုတော့မည်ဖြစ်ပြီး ထို့အတွက် Quarantine ၇ ရက် (သို့) ၁၄ ရက် ဝင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
စားအုန်းဆီအများဆုံးတင်ပို့သည့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံက စားအုန်းဆီပြည်ပတင်ပို့မှု ပိတ်ပင်ထားခြင်းကို ရုပ်သိမ်းမည်ဟု ကြေညာပြီးချိန်၌ အကျဘက်သို့ဦးစိုက်စပြုနေသည့် စားအုန်းဆီဈေးနှုန်းများ ဆက်လက်ကျဆင်းသွားစေခဲ့ကြောင်း၊ ရောင်းလိုအားပိုများလာပြီ ဝယ်လိုအားများ လျော့ကျနေသည့်အတွက် ကျဆင်းလက်စကို ဆက်လက်ကျဆင်းသွားစေခဲ့ကြောင်း၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ ဧပြီ လ ၂၈ ရက်တွင်စတင်ခဲ့သည့် စားအုန်းဆီပြည်ပတင်ပို့မှု ပိတ်ပင်တားမြစ်ချက်သည် မေလ ၂၃ ရက်တွင် အဆုံးသတ်မည်ဖြစ်ပြီး လာမည့်ဇူလိုင်လ၊ ဩဂုတ်လတွင် စားအုန်းဆီတစ်တန်ဈေးနှုန်း ရင်းဂစ် ၅၀၀၀ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၁၃၅) အထိ ကျဆင်းသွားလိမ့်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြကြောင်း၊ မလေးရှား စားအုန်းဆီကို အများဆုံးဝယ်ယူသည့် တရုတ်နှင့်အိန္ဒိယတို့သို့ တင်ပို့မှုမှာ မေလ၊ပထမလဝက်တွင် လျော့ကျခဲ့ခြင်းမှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှဝယ်လက်များက ဈေနှုန်းကြီးမြင့်မှုကြောင့်ဖြစ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံက Lockdown ကြောင့် လျှော့ဝယ်ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ကွာလာလမ်ပူ ကြိုပွိုင့်အရောင်းအဝယ်မှာလည်း ဈေးကျဆင်းခဲ့ပြီး ဝါရင့်ကုန်သည်တစ်ဉီးက စားအုန်းဆီဈေးနှုန်းများသည် ဇွန်လတွင် တစ်တန်လျှင် ရင်းဂစ် ၅၀၀၀ အထိ ကျဆင်းနိုင်ပြီး စက်တင်ဘာလတွင် ရင်းဂစ် ၄၀၀၀ အထိကျဆင်းမည်ဟုခန့်မှန်း ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
ပြောင်းဆန်တင်ပို့မည့် EOI Form စာရင်းတင်သွင်းလာသည့်ကုမ္ပဏီ ၁၄၀ ကျော်ရှိ
တရုတ်နိုင်ငံသို့ ပြောင်းဆန်တင်ပို့မည့်ကုမ္ပဏီများ စိစစ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ စိတ်ဝင်စားမှု အဆိုပြုလွှာ (EOI Form) စာရင်းတင်သွင်းလာသည့်ကုမ္ပဏီ ၁၄၀ ကျော်ရှိပြီး အဆိုပါ EOI Form စာရင်း တင်သွင်းလာသည့်ကုမ္ပဏီများကို စားသုံးသူရေးရာဉီးစီးဌာနနှင့် မြန်မာ့ကုန်ပစ္စည်း စစ်ဆေးရေးနှင့်စမ်းသပ်မှုလုပ်ငန်းလီမိတက်(MITS)မှ တာဝန်ရှိသူများက ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်းများကို လုပ်ဆောင်နေသည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံ ပြောင်းလုပ်ငန်းအသင်းမှ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ က ဆင်ဟွာသတင်းသို့ ပြောကြားခဲ့ကြောင်း၊ ထိုသို့စစ်ဆေး၍ရ ရှိလာသော သုံးသပ်ချက်နှင့်ရလာဒ်အဖြေများကို စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနနှင့် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့မှ အတွင်းဝန်များ ပါဝင်သော ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့က ထပ်မံစစ်ဆေးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံသို့ လမ်းကြောင်း ပွင့်သွားပါက လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် Logistic ပိုင်းတွင် များစွာသက်သာသွားမည်ဖြစ်ပြီး အရည်အသွေး စစ်ဆေး၍ ‌အောင်မြင်သည့်ကုမ္ပဏီများက တရုတ်နိုင်ငံသို့တင်ပို့ခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လက်ရှိတွင် ပြောင်းဈေးကွက်မှာ အတက်ဘက်တွင်ရှိနေရာ ဇူလိုင်လနှင့်ဩဂုတ်လတွင် တရုတ်နိုင်ငံသို့ ပြောင်းဆန်များ စတင်တင်ပို့ခွင့်ရရှိနိုင်မည်ဟုခန့်မှန်းထားကြောင်းသိရှိရပါသည်။
တရုတ် - မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ Plant Quarantine Protocol လက်မှတ်ရေးထိုး
တရုတ် အ‌ကောက်ခွန်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဉီးစီးဌာနနှင့် မြန်မာ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနတို့သည် မြန်မာ့ပြောင်းဖူးများ တရုတ်နိုင်ငံသို့ တင်ပို့ရောင်းချသည့်အတွက် တရုတ်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံ Plant Quarantine Protocol လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြကြောင်း၊ မြန်မာ့ပြောင်းဖူး များ တရုတ်ဈေးကွက်သို့ဝင်ရောက်နိုင်ပြီး ပင်လယ်ရေကြောင်းနှင့်နယ်စပ်လမ်းကြောင်းတို့မှ တရားဝင် တင်ပို့ရောင်းချနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပဲပုပ်၊ ပီလောပီနံနှင့်ကန်စွန်းဥအတွက် ညှိနှိုင်းမှုပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
ယူကရိန်းနှင့်ရုရှားပဋိပက္ခကြောင့် တိရစ္ဆာန်အစားအစာတွင် ပါဝင်သောပစ္စည်းများပြတ်လပ်မှုကို လျော့ပါးသက်သာစေရန်အတွက် အစိုးရအဖွဲ့သည် မေလမှ ဇူလိုင်လအထိ ပြောင်းတန်ချိန်(၆)သိန်းကို အခွန်(၀%)ဖြင့်တင်သွင်းခွင့်ပြုရန် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အဆိုပြုချက်အား ၃-၅-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် အတည်ပြုပေးခဲ့ကြောင်း၊ အစိုးရ၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက အဆိုပါပြောင်းများ တင်သွင်းမှုကို Public Warehouse Organization(PWO)နှင့် အထွေထွေကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းသူများ (General Importers)မှ ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်လိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့ကြောင်း၊ ယခင်သတ်မှတ်ချက်များအရ PWO အနေဖြင့် ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့(WTO) ၏ Quota အရ တစ်နှစ်လျှင် ပြောင်းတန်ချိန် (၅၄၇၀၀၀)အား အခွန်(၂၀ %)ဖြင့် တင်သွင်းခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်း၊ ဂျုံနှင့်ပြောင်းကဲ့သို့ တိရစ္ဆာန်အစာ ရောစပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့်သီးနှံများသည် လပေါင်းများစွာ ပြတ်လပ်နေသည့်အတွက် အဆိုပါဂျုံနှင့် ပြောင်းတို့အား အစိုးရအနေဖြင့် ပြည်တွင်းလယ်သမားများအား အကာအကွယ်ပေးရန် ဆောင်ရွက်ခဲ့သော အတားအဆီးများကို ဖယ်ရှားပေးရန် တိရစ္ဆာန်အစာထုတ်လုပ်သူများက အစိုးရကို တိုက်တွန်းတောင်းဆိုခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ အစိုးရအဖွဲ့သည် ဂျုံတင်သွင်းမှုအပေါ် ယာယီရပ်ဆိုင်းရန် အဆိုပြုချက်ကိုအတည်ပြုပေးခဲ့ကြောင်း၊ ဂျုံတင်သွင်းသူများအနေဖြင့် ပြည်တွင်းထွက်ပြောင်းကို (၁:၃)ဖြင့် မေလမှဇူလိုင်လအထိ (၃)လကြာဝယ်ယူရန်ဖြစ်ကြောင်း၊ အစိုးရအဖွဲ့သည် ပြည်တွင်းထွက်ပြောင်းနှင့် ပီလောပီနံဈေးတက်စေရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဂျုံတင်သွင်းမှုကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်ကန့်သတ်ခဲ့ကြောင်း၊ အစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် ဆန်စပါးနှင့်ပြောင်း အာမခံအစီအစဉ်အတွက် အထောက်အပံ့ပေးရန် ဘတ်ငွေ (၂.၁၄)ဘီလီယံအားအတည်ပြုပေးခဲ့ရာ အဆိုပါအနက် (၁.၉၂)ဘီလီယံမှာ ဆန်စပါးအာမခံ အစီအစဉ်အတွက်ဖြစ်ပြီး ကျန်ငွေမှာ ၂၂၄ သန်းမှာ ပြောင်းအာမခံအစီအစဉ်အတွက်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဆန်စပါး အာမခံအစီအစဉ်သည် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် မြေ(၂၈.၅)သန်းရိုင်အားလွှမ်းခြုံနိုင်မည်ဖြစ်ရာ ၂၈ သန်းရိုင်မှာ အစိုးရပိုင် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်သမဝါယမဘဏ်၏ဖောက်သည် လယ်သမားများ ပိုင်ဆိုင်သည့် မြေများဖြစ်ပြီး ကျန်မြေ ၅ သောင်းရိုင်မှာ အခြားသော လယ်သမားများပိုင်ဆိုင်သည့် မြေများဖြစ်ကြောင်း၊ ပြောင်းအာမခံအစီအစဉ်အနေဖြင့် မြေ ၂.၀၆ သန်းရိုင်အပေါ် လွှမ်းခြုံနိုင်မည်ဖြစ် ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ ရှိ စက်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီးများသည် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများရှိ စက်မှုလုပ်ငန်း များထက် စွမ်းအင်သုံးစွဲခများ ၃ ပုံ ၁ ပုံခန့် ပိုမိုပေးဆောင်နေရပြီး ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်း အားနည်းချက်(Competitive disadvantage) များရှိလာကြောင်း၊ နိုင်ငံ၏ ဖက်ဒရယ်အစိုးရက ဘယ်လ်ဂျီယံကုမ္ပဏီများ၏ စွမ်းအင်ကုန်ကျစရိတ်များအား အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် တန်းတူဖြစ်စေရေးအတွက် စွမ်းအင်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများ သတ်မှတ်ထားစေကာမူ ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် စွမ်းအင်သုံးစွဲခ ကုန်ကျစရိတ်များအတွက် ဆက်လက်ရုန်းကန်နေကြရသည်ဟု ဘယ်လ်ဂျီယံ စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်သုံးစွဲသူများအသင်းချုပ် က ပြောကြားခဲ့ကြောင်း၊ အီးယူ၏ စက်မှုလုပ်ငန်းကဏ္ဍတစ်ခုလုံးအနေဖြင့် အခြားကမ္ဘာ့ဒေသများနှင့်ယှဉ်လျှင် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းအားနည်းချက်များရှိနေခြင်းကြောင့် ဆယ်စုနှစ်များတွင် အကျပ် အတည်းဆီသို့ ဉီးတည်စေနိုင်ကြောင်း၊ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ၏စက်မှုလုပ်ငန်းများသည် အနောက်ဥရောပ အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံများတွင်‌ ပေးဆောင်ရသည့် ပျမ်းမျှလျှပ်စစ်ဓါတ်အားခနှင့်နှိုင်းယှဉ်ချက်အရ ၁၉% မှ ၂၅ % အကြားယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းအားနည်းချက်ရှိစေကြောင်း၊နှိုင်းယှဉ်ချက်အရ ၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွက် ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ၏ စွမ်းအင်ဈေးနှုန်းသည် နယ်သာလန်နိုင်ငံနှင့်တန်းတူပင်ဖြစ်သော်လည်း ပြင်သစ်နိုင်ငံထက် ၂၃၁ % ၊ ဂျာမနီနိုင်ငံထက် ၃ % ပို၍မြင့်မားသည်ဟုဆိုကြောင်း၊ ဘယ်လ်ဂျီယံ၏ စက်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်း အားနည်းချက်ဖြစ်ပေါ်နေသည့်အပြင် မြောက်/တောင်အမေရိက၊ အာဖရိက၊ ဩစတြေးလျ စသည့် ကမ္ဘာ့အခြားဒေသများရှိ စွမ်းအင် သုံးစွဲခ သိသာစွာလျော့နည်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်လည်း ယှဉ်ပြိုင်နေကြရကြောင်းနှင့် အခွန်နှင့် ဓါတ်အားလိုင်းချိတ်ဆက်ပို့လွှတ်ခ ကုန်ကျစရိတ်များ လျှော့ချပေးခြင်းအပါအဝင် အီးယူ၏ စက်မှုလုပ်ငန်းကဏ္ဍယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်း ပြန်လည်တိုးတက်စေရေးအတွက် လိုအပ်သောအစီအမံများကို ဆောလျင်စွာဆောင်ရွက်‌‌ပေးရန် ဘယ်လ်ဂျီယံ၏စက်မှုလုပ်ငန်းကဏ္ဍအနေဖြင့် ဥရောပအဆင့်အာဏာပိုင် အဖွဲ့များ၊ ဖက်ဒရယ်အဆင့်နှင့်ဒေသအဆင့်အာဏာပိုင်များထံ တောင်းဆိုထားကြောင်းသိရှိရပါသည်။
ဧပြီလနှောင်းပိုင်း၌ အရှေ့အလယ်ပိုင်း‌ဈေးကွက်မှ ဝယ်လိုအားကြောင့် ထိုင်းဆန်ဈေးနှုန်း မြင့်တက်ခဲ့သည့်မှအပ အာရှဆန်‌ဈေးကွက်တည်ငြိမ်ခဲ့သော်လည်း အမေရိကန်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး ဈေးကွက်၌မူ ဂျုံ၊ ပြောင်းနှင့်ပဲပုတ်တို့၏ ကုန်သွယ်မှုကျဆင်းခဲ့ကြောင်း၊ ဧပြီလနောက်ဆုံးအပတ်အတွင်း ထိုင်းနိုင်ငံမှ (5% Broken) ဆန်‌ဈေးနှုန်းမှာ ယခင်အပတ်ကထက် (၂၂ ဒေါ်လာ)ခန့်မြင့်တက်ခဲ့ကြောင်း၊ အီရန်၊အီရတ်နိုင်ငံတို့မှ ဝယ်လိုအားများအပြင် ဆော်ဒီအာရေဗျနှင့်ဆက်ဆံရေးတိုးတက်လာသဖြင့် ထိုင်းဆန်များကို ဝယ်လိုအားတက်လာခြင်းဖြစ်သော်လည်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစရိတ်စကများမှာ ထိုင်းဆန်တင်ပို့မှုအတွက် အဓိကစိန်ခေါ်မှုဖြစ်နေကြောင်း၊ ဧပြီလ (၂၈)ရက်တွင် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှ (5% Broken)ဆန်‌ဈေးနှုန်းမှာ တစ်တန်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၄၁၅)ရှိခဲ့ပြီး ဈေးနှုန်းမပြောင်းလဲခဲ့သော်လည်း ဆောင်းရာသီ၊နွေဉီးရာသီရိတ်သိမ်းမှုပြီးစီးလုပြီဖြစ်ကာ ရောင်းလိုအားနည်းလာသောကြောင့် လာမည့်ရက်သတ္တပတ်များတွင် ဈေးတက်ဖွယ်ရှိ၍ ကုန်သည်များအနေဖြင့် ပို့ကုန်စာချုပ်အသစ်များ ချုပ်ဆိုရန်တွန့်ဆုတ်နေကြကြောင်း၊ ဟိုချီမင်းဆိပ်ကမ်းမှ မေလ(၄)ရက်နေ့တွင် တန်ချိန်(၃၀၀၉၉၀) တန်နှင့် မေလ(၅)ရက်နေ့တွင် တန်ချိန်(၄)သောင်းသင်္ဘောတင်ခဲ့ပြီး ၎င်းဆန်များကို ဖိလစ်ပိုင်၊ အာဖရိကနှင့်ကျူးဘားတို့သို့ တင်ပို့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ လက်ရှိရာသီတွင် ဘင်္ဂလား‌ဒေ့ရှ် အစိုးရက လယ်သမားများထံမှ ဆန် ပိုမိုဝယ်ယူနေရာ မေလ(၇)ရက်နေ့မှစ၍ ပြည်တွင်းစိုက်ပျိုးသူများထံမှ ဆန် နှင့်ဂျုံ တန်ချိန်(၁.၈)သန်းကို ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများကိုဝေငှပြီး ပြည်တွင်းဈေးနှုန်း တည်ငြိမ်စေရန် ‌ဆောင်ရွက်မည့်အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအတွက် အလွန်အရေးပါသည့်ရွေ့လျားမှုဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
လယ်သမားများ၏ ဝင်ငွေကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် လယ်ယာကဏ္ဍရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲစေရန်အတွက် အော်ဂဲနစ်ဆန်များ အရှိန်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်သွားရန် တာဝန်ရှိဌာနဆိုင်ရာများအား အစိုးရကညွှန်ကြားထားကြောင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်က ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဦးဆောင်ကျင်းပဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် အမျိုးသား ဆန်စပါးမူဝါဒ‌ကောင်စီအစည်းအဝေးတွင် ဆက်စပ်ဌာနဆိုင်ရာများအနေဖြင့် အော်ဂဲနစ်ထုတ်ကုန် ဈေးနှုန်းမြှင့်တင်ရေးစီမံကိန်း ဒုတိယအဆင့်(၂၀၂၂-၂၀၂၅)တွင် လုပ်ငန်းများအား တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်သွားကြရန်အမိန့်ပေးခဲ့ကြောင်း၊ လယ်သမားများ၏ ဝင်ငွေနှင့် လူနေမှုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်အတွက် သုတေသန၊စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့် ဆန်စပါးဆိုင်ရာနည်းပညာလုပ်ငန်းများကို ပိုမိုမြှင့်တင်ဆောင်ရွက် သွားကြရန် သက်ဆိုင်ရာဌာနများအား တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း၊ အစိုးရအနေဖြင့် ရေရှည်တွင် ဈေးနှုန်း အာမခံချက်အတွက် ၎င်း၏ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကို လျှော့ချသင့်သည်ဟု ပြောကြားခဲ့ကြောင်း၊
အမျိုးသား ဆန်စပါးမူဝါဒ‌ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပြီး လယ်သမားများ၏ ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူက အစိုးရ၏ မြှင့်တင်ရေးမူဝါဒပြတ်တောက်မှုသည် အော်ဂဲနစ်ဆန် စိုက်ပျိုးမှုအတွက် အဓိကအတားအဆီးတစ်ခု ဖြစ်ကြောင်း၊ အစိုးရနှင့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်သမဝါယဝန်ကြီးဌာန၊ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်း ဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးများအပြောင်းအလဲက ‌အော်ဂဲနစ်ဆန်စိုက်ပျိုးရေးကိစ္စအား ရပ်တန့်စေခဲ့ကြောင်း၊ အစိုးရအနေဖြင့် အော်ဂဲနစ်ဆန်တိုးမြှင့်စိုက်ပျိုးရေးအတွက် စိတ်ဝင်စားမှုနည်းပါးသည်ဟု အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြခဲ့ကြောင်း၊ အစိုးရဌာနဆိုင်ရာများအနေဖြင့် ၂၀၂၂-၂၀၂၅ ခုနှစ်အတွင်း ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအစီအစဉ်သစ်များကို ပိုမိုအလေးထားဆောင်ရွက်လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ရကြောင်း၊ အမျိုးသားဆန်စပါးမူဝါဒကောင်စီအနေဖြင့် ယခုနှစ်အတွင်း အော်ဂဲနစ်ဆန် စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ထောက်ပံ့ငွေ ဘတ်(၁၄၆)သန်းအား အတည်ပြုပေးခဲ့ပြီး ဈေးကွက်ရရှိရေးနှင့် အရည်အသွေး စံချိန်စံညွှန်းတိုးတက်ရေးအတွက် တောင်သူလယ်သမားများအားကူညီပေးရန် အစိုးရဌာနဆိုင်ရာများအား ညွှန်ကြားထားကြောင်း၊ ထိုင်းအော်ဂဲနစ်ဆန် စိုက်ပျိုးသည့်လယ်သမားများအနေဖြင့် အခွင့်အရေးများစွာရှိနေရခြင်းမှာ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် တရုတ်၊ ဂျပန်နှင့်ဥရောပသို့ အော်ဂဲနစ်ဆန်တန်ချိန် (၁၀၀,၀၀၀) တင်ပို့ရောင်းချရန်အတွက် လယ်သမားများအနေဖြင့် ရပ်ရွာအခြေပြု စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသင်းများအား ထူ‌ထောင်ထားခဲ့ပြီးဖြစ်ခြင်းကြောင့် အလားအလာကောင်းများရှိနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
တရုတ်ဈေးကွက်သို့ RCEP လှိုင်းစီးသွားသောအရှေ့တောင်အာရှသီးနှံများ
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁)ရက်နေ့တွင် စတင်အသက်ဝင်ခဲ့သော ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးလွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်ဖြစ်သည့် ဒေသတွင်း ဘက်စုံစီးပွားရေး မိတ်ဖက်ဆက်ဆံမှု (RCEP) သဘောတူညီချက်သည် ယခုနှစ်ရောင်းအားကို ထပ်မံမြှင့်တင်ပေးလျှက်ရှိပြီး RCEP အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများအကြား ကုန်စည်ကုန်သွယ်မှု၏ ၉၀% ကျော်မှာ တစ်ဖြေးဖြေးချင်း စည်းကြပ်ခွန် ကင်းလွတ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ဦးဆောင်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုက ဒူးရင်းသီး သေတ္တာ (၁၀၀) လက်ခံရရှိထားပြီး ရောက်ရှိလာပါက ဖြန့်ဝေသွားမည်ပြီး ယခင်နှစ်ကာလတူနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဒူးရင်းသီးများသည် ယခုနှစ်တွင် ဈေးနှုန်းမြင့်တက်နေသော်လည်း ရောင်းအားကောင်းနေသည်ဟု ပြောကြားခဲ့ကြောင်း၊ ဒူးရင်းသီးများသည် တရုတ်နိုင်ငံတစ်ဝန်း အစားအသောက်ချစ်သူများ၏ အရသာတွေ့မှုကိုသိမ်းပိုက်ထားပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် လတ်ဆတ်သစ်သီးတင်သွင်းမှုပမာဏမှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ကထက် ၄ ဆရှိခဲ့ကြောင်း၊ ကွမ်ရှီးကျွမ့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ မြို့တော်နန်နင်းရှိ ထိုင်းနိုင်ငံသားတစ်ဉီးက ထိုင်းနိုင်ငံရှိ၎င်း၏ မိသားစုပိုင်သစ်သီးခြံမှ ဒူးရင်းသီးများကို တရုတ်နိုင်ငံသို့ တင်ပို့သည့် စီးပွားရေးကိုလုပ်ကိုင်လျှက်ရှိပြီး လွန်ခဲ့သောနှစ်များအတွင်း တည်ငြိမ်သောဖောက်သည် အရင်းအမြစ်ရရှိခဲ့ကြောင်း၊ ကွမ်ရှီးကျွမ့်ဒေသတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပိုမိုဝင်ရောက်လာခြင်းက နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် သစ်သီးကုန်သွယ်ရေး အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန် အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် အအေးခန်းထောက်ပံ့သယ်ပို့မှုသို့ အားဖြည့်ပေးလျက်ရှိကြောင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံမှဒူးရင်းသီးများအပြင် မလေးရှားနိုင်ငံမှ ဒူးရင်းသီးများမှာလည်း တရုတ်နိုင်ငံတွင် လူကြိုက်များလျှက်ရှိကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံ နှင့်မလေးရှားနိုင်ငံမှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် ဒူးရင်းသီးကုန်သွယ်ရေးတွင် အာရုံစူးစိုက်မှု ရရှိလာ သည့်အနက် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ကုန်သွယ်ရေး၌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် မဟာဗျူဟာမြောက် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရန် သဘောတူစာချုပ်(၁၁)ခုကို လတ်တလော လက်မှတ်ရေးထိုးထားကြောင်း၊ RCEP အောက်တွင် တရုတ်နိုင်ငံနှင့်မလေးရှားနိုင်ငံတို့သည် စီးပွားရေးနီးကပ်မှုနှင့် ကုန်သွယ်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ထူထောင်နိုင်မည်ဟု မလေးရှား နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်‌ရေးနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်း ဝန်ကြီးဌာနမှ ဒုတိယဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
(ရင်းမြစ်- Myanmar Food Guide မှ ရရှိသည့်သတင်း)
အိန္ဒိယနိုင်ငံအစိုးရကဂျုံတင်ပို့မှုကို မေလ ၁၄ ရက်တွင် စတင်ပိတ်ပင်ခဲ့ကြောင်း၊ ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်ထဲသို့ အိန္ဒိယ ဂျုံတန်ချိန် ၁၀ သန်းကို ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း တင်ပို့ရန်လျာထားကြောင်း၊‌ မော်ရိုကို၊ တူနီးရှား၊အင်ဒိုနီးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ထိုင်း၊ဗီယက်နမ်၊ တူရကီ၊ အယ်လ်ဂျီးရီးယားနှင့်ဘက်ဘနွန် စုစုပေါင်း နိုင်ငံ(၉)နိုင်ငံသို့ ဂျုံတင်ပို့ရောင်းချရန် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များစေလွှတ်မည်ဟု ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့ပြီး ယခုအခါ မူဝါဒ ဂ ငယ်ကွေ့ ကွေ့လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ Letter of Credit (LC) ထုတ်ပြီးသည့် ဂျုံတင်ပို့မှုများကို ခွင့်ပြုမည်ဟုဆိုကြောင်း၊ ဂျုံကို မရှိမဖြစ်လိုအပ်နေသော နိုင်ငံများအနေဖြင့် နိုင်ငံ အစိုးရက တောင်းဆိုသည့်အခါ သုံးသပ်စိစစ်ပြီး တင်ပို့ခွင့်ကို ခွင့်ပြုပေးမည်ဟုဆိုကြောင်း၊ ရုရှားနှင့် ယူကရိန်းကျူးကျော်စစ်ကြောင့် ၎င်းတို့ထံမှဂျုံများ ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်ထဲသို့စီးဝင်မှု အလွန်နည်းပါးနေချိန်တွင် ဂျုံထုတ်လုပ်မှု ဒုတိယအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သည့် အိန္ဒိယနိုင်ငံထံမှ ဂျုံကို ဝယ်လက်များက အားထားနေရချိန်၌ ယခုကဲ့သို့ပိတ်ပင်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ အိန္ဒိယဂျုံ မရနိုင်တော့သဖြင့် ကမ္ဘာ့ဂျုံ ဈေးနှုန်း မြင့်တက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး အာရှနှင့်အာဖရိကမှ မချမ်းသာသည့်နိုင်ငံများအနေဖြင့် ဂျုံတင်သွင်းရန် အခက်ကြုံကြမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် မတ်လလယ်၌ အပူလှိုင်း ကျရောက်ခဲ့ပြီး ဂျုံ အထွက်နှုန်းကျဆင်းခဲ့ကာ ပြည်တွင်း ဂျုံဈေးနှုန်း စံချိန်တင် မြင့်တက်နေသဖြင့် ဂျုံ တင်ပို့မှု ပိတ်ပင်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ဂျုံတစ်တန်လျှင် ရူပီး ၂၅၀၀၀ (၃၂၂.၇၁ ဒေါ်လာ) ပေါက်ဈေး ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း၊ ဧပြီလ၌ ဂျုံတန်ချိန် ၁.၄ သန်းစံချိန်တင် တင်ပို့ခဲ့ပြီး မေလတွင် ပြည်ပတင်ပို့ရန် ရောင်းချထား ပြီးသည့် ဂျုံတန်ချိန် ၁.၅ သန်း ဝန်းကျင်ရှိကြောင်း၊၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် ဂျုံ မက်ထရစ်တန်ချိန် ၇ သန်း စံချိန်တင် တင်ပို့ခဲ့ရာ တန်ဖိုးအားဖြင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂.၀၅) ဘီလီယံရှိပြီး ဂျုံတင်ပို့မှု စုစုပေါင်း၏ ၅၀ % ဝန်းကျင်ကို ဘင်္ဂလား‌ဒေ့ရှ်နိုင်ငံသို့တင်ပို့ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
၁။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ မလိုလားအပ်သော စွက်ဖက်အရေးယူမှုများကို ဖယ်ရှားခြင်းဖြင့် စီးပွားရေး လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုများ လွယ်ကူမှုရှိစေရန်အတွက် ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင်ပြဌာန်းခဲ့သော တိကျစွာ တိုင်းတာမှု အက်ဥပဒေပါ ရာဇဝတ်ကြောင်းအရ အရေးယူရန် ပြဌာန်းချက်များအား ဖြေလျော့ နိုင်ရေး အမျိုးသားအဆင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ရပ်ကို အိန္ဒိယစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနက ၉-၅-၂၀၂၂ နေ့တွင် စီစဉ်ကျင်းပရာ တိကျစွာတိုင်းတာမှု လုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များမှ ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်တက်ရောက် ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရ ပါသည်။
၂။ အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲ၌ ရာဇဝတ်ကြောင်းအရ အရေးယူရမည့် ဥပဒေပြဌာန်းချက်များအား ဖြေလျော့မှုပြုရာ၌ သဘောတရားထက် လက်တွေ့ကျစွာ ချဉ်းကပ်လုပ်ဆောင်ရန်လိုကြောင်း၊ စားသုံးသူများ၏ အကျိုးစီးပွားနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် လွန်ကဲသည့်အခက်အခဲများ မဖြစ်ပေါ်စေရေး ဥပဒေပြဌာန်းချက်များအား ရှင်းလင်းလွယ်ကူအောင် ဆောင်ရွက်မှုတို့အကြား ညီညွှတ်မျှတမှုရှိမည့် အစပြုလုပ်ဆောင်မှုများကို ကူညီပံ့ပိုးပေးရန် ပြည်နယ်များသို့ တိုက်တွန်း လိုကြောင်း၊ အထူးသဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းငယ်များအတွက် အလေးပေးဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ် ကြောင်း၊ စားသုံးသူများ အနေဖြင့် မတရားမှုနှင့် တွေ့ကြုံရခြင်း မရှိစေရန်မှာ အစိုးရဌာနများ၏ တာဝန်ဖြစ်သကဲ့သို့ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် လုပ်ငန်းရှင်များ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အေးချမ်းစွာ လုပ်ကိုင်နိုင်စေရန်အတွက် တာဝန်ရှိသည်ကိုလည်း နားလည်ထားရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အဓိက အားဖြင့် မရိုးဖြောင့်သော သဘောဖြင့် လုပ်ကိုင်မှုနှင့် ရိုးသားဖြောင့်မတ်စွာ လုပ်ဆောင်မှုတို့ကို ခွဲခြားနိုင်ရေး ဦးတည်ချက်ထားရှိရန်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဥပမာအားဖြင့် အလေးချိန်နှင့် အချင်အတွယ် တိုင်းတာသည့် ကိရိယာများ စံကိုက်ညှိခြင်း (calibration) ကို မမှန်မကန်ပြုလုပ်ထားပါက တင်းကြပ်စွာ အရေးယူဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း စသည်ဖြင့် အိန္ဒိယ ကူးသန်းရောင်းဝယ် ရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာနနှင့် စားသုံးသူရေးရာ၊ စားနပ်ရိက္ခာနှင့် ပြည်သူ့ဖြန့်ဖြူးမှုရေးရာ ဝန်ကြီး ဌာနတို့၏ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး Mr. Piyush Goyal က အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။
၃။ ဝန်ကြီး Mr. Piyush Goyal ၏ ပြောဆိုမှုအရ တိကျစွာတိုင်းတာမှု ဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက် အချို့အပေါ် ပထမအကြိမ် ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်မှုများ၏ ၉၇% ခန့်ကို ပြည်နယ်အစိုးရများက စာရင်းရေးသွင်း ဖော်ပြမှုရှိသော်လည်း တူညီသည့် ဥပဒေပုဒ်မအား ဒုတိယအကြိမ် ကျူးလွန်မှုကို ဖော်ပြအရေးယူဆောင်ရွက်မှုမှာ နည်းပါးကြောင်း သိရှိရသည်။ သို့ဖြစ်ရာ ထိုကဲ့သို့ ဒုတိယ အကြိမ် ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းများ မရှိကြောင်း အစီရင်ခံတင်ပြမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်နယ်များ ၌ မည်သို့ဆောင်ရွက်ထားသည်မှာ မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်ကြောင်းနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရများ အနေဖြင့် ရာဇဝတ်ကြောင်းအရ အရေးယူရန် ပြဌာန်းချက်များအား ဖြေလျော့ခြင်းအား ဆန့်ကျင် ကန့်ကွက်သည့်သဘောရှိသည်ကို ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များက ဖော်ပြလျက်ရှိကြောင်း ဖြင့် ၎င်းက ပြောကြားပါသည်။
၄။ အိန္ဒိယ စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန၏ စာရင်းများအရ ၂၀၁၈-၁၉ ခုနှစ်အတွင်း ပြည်နယ်/ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေများ၌ ပထမအကြိမ် ပြစ်မှုကျူးလွန်သည်ဟု စာရင်းရေးသွင်းထားသည့် အမှုပေါင်း ၁၁၃၇၄၅ ခုရှိပြီး ၎င်းအနက် အမှုပေါင်း ၉၇၆၉၀ မှာ ညှိနှိုင်းကျေအေးခဲ့ကြောင်း၊ အဆိုပါနှစ်အတွင်း တူညီသည့် ဥပဒေပုဒ်မအား ဒုတိယအကြိမ် ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်သည့် အမှု ပေါင်း ၁၂ ကိုသာ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပြီး ၎င်းတို့အနက် အမှု ၄ ခုကိုသာ တရားရုံး၌ အမှုဖွင့်လှစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ ၂၀၂၁-၂၂ ခုနှစ်တွင် ပထမအကြိမ် ပြစ်မှုကျူးလွန်မှု ၇၄၇၂၁ ခုကို မှတ်တမ်းတင်ထားရှိပြီး ၎င်းအနက် အမှု ၅၅၇၇၉ မှုကို ညှိနှိုင်းကျေအေးခဲ့ကြောင်း၊ ဒုတိယ အကြိမ် ပြစ်မှုကျူးလွန်မှုမှာ ၁၁ မှုရှိပြီး ၎င်းအနက် အမှု ၇ ခုကို တရားရုံးတင် စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
၅။ အိန္ဒိယအစိုးရသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအပေါ် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးလျော့ချရေး၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သူများအကြား ယုံကြည်မှုကို လှုံ့ဆော်နိုင်ရေး၊ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှင့် စားသုံးသူများ၏ အကျိုးစီးပွား အကာအကွယ်ပေးရေးတို့ကို ရှေ့ရှုလျက် ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ တိကျစွာတိုင်းတာမှု အက် ဥပဒေပါ ရာဇဝတ်ကြောင်းအရ အရေးယူရန် ပြဌာန်းချက်များအား ဖြေလျော့ခြင်းကို ဆောင်ရွက် မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
Source: 1. National Workshop to discuss decriminalization of Legal Metrology Act, 2009, 8-5-2022, Press Information Bureau of India
2. Shri Piyush Goyal emphasises balance between need to protect consumers, and preventing harassment of entrepreneurs, 9-5-2022, Press Information Bureau of India
Read more about တိကျစွာတိုင်းတာမှု အက်ဥပဒေပါ ရာဇဝတ်ကြောင်းအရ အရေးယူရန် ပြဌာန်းချက်များအား အိန္ဒိယအစိုးရက ဖြေလျော့မည်
ဂျုံထွက်ရှိနိုင်မှုအား အစိုးရက လျှော့ချခန့်မှန်း
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ သီးနှံစိုက်ပျိုးနှစ် (ဇူလိုင်-ဇွန်လ)အတွင်း ဂျုံ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင် မည့်ပမာဏအား မူလကတန်ချိန် ၁၁၁.၃၂ ရှိမည်ဟုခန့်မှန်းထားရာမှ ယခုနှစ်နွေရာသီကာလ၌ အပူလှိုင်း ကျရောက်မှုကြောင့် အဆိုပါပမာဏမှ ၅.၇% လျှော့ချလျှက် တန်ချိန် (၁၀၅)သန်းခန့်သာ ထွက်ရှိနိုင်ဖွယ်ရှိသည်ဟု အိန္ဒိယ စားသုံးသူ‌ရေးရာ၊စားနပ်ရိက္ခာနှင့် ပြည်သူ့ဖြန့်ဖြူးမှုရေးရာဝန်ကြီး ဌာနအတွင်းဝန်ကသတင်းစားရှင်းလင်းပွဲ၌ပြောကြားခဲ့ကြောင်း၊ပြည်နယ်အချို့၌ အစိုးရ၏အနိမ့်ဆုံး ထားရှိဝယ်ယူပေးမည့် အခြေခံရည်ညွှန်းဈေးနှုန်း(MSP)ထက် ဈေးကွက်ပေါက်ဈေး မြင့်မားလျှက်ရှိခြင်း၊ ပြည်နယ်အချို့၌ ဂျုံအထွက်ပမာဏလျော့ကျဖွယ်ရှိခြင်း၊တောင်သူများကလည်း ၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန် များအား လက်ဝယ်သိုလှောင်ထားရှိသကဲ့သို့ ကုန်သည်များကလည်း ဈေးနှုန်းများ ဆက်လက်မြင့် တက်လာနိုင်ချေရှိသည်ကို မျှော်မှန်းလျှက်ရှိခြင်း စသည့်အခြေအနေများအရ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခုနှစ် ဈေး ကွက်ရာသီကာလ(ဧပြီလမှ မတ်လအထိ) အတွင်း အရန်ရိက္ခာဂျုံဝယ်ယူမှုမှာ ယခင်နှစ်အောက် လျော့ကျလျှက် တန်ချိန်(၁၉.၅)သန်းခန့်သာ ဝယ်ယူရရှိနိုင်မည်ဟု အစိုးရက ခန့်မှန်းထားကြောင်း၊ ဂျုံသီးနှံသည် ယခင်နှစ် စိုက်ပျိုးထွက်ရှိမှုအောက် လျော့နည်းသော်လည်း အစိုးရအနေဖြင့် ပြည်ပ တင်ပို့မှုကို ထိန်းချုပ်မှုပြုမည်မဟုတ်ဘဲ အစိုးရ၏ အခမဲ့စားနပ်ရိက္ခာပေးဝေရေးရာရှင်စနစ် အောက်တွင် ဂျုံအစား ဆန်တန်ချိန် ၂၂ သိန်းကို ပြည်နယ်များသို့ ဖြန့်းဖြူးပေးရန် ခွဲဝေလျာထားပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း အိန္ဒိယအစိုးရက ထုတ်ပြန်ခဲ့သော သီးနှံထွက်ရှိနိုင်မှု ခန့်မှန်းချက်များ အပေါ်အခြေပြု၍ လက်ရှိ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင်လည်း ဂျုံတန်ချိန် ၁၂ သန်းထိ ပြည်ပတင်ပို့ နိုင်မည်ဟု ကုန်သည်များကမျှော်မှန်းခဲ့ကြကြောင်း၊ အပူလှိုင်းကျရောက်မှုကြောင့် ဂျုံသီးနှံစေ့များ ကျုံ့ဝင်ပျက်စီးမှုသည် ၂၀ % ရှိပြီး ထုတ်လုပ်မှုပမာဏသည် ၆၀ % လျော့ကျနိုင်မည်ဟုဖော်ပြထား ကြောင်း၊ နယူးဒေလီ မြို့အခြေစိုက် ကုန်သည်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးဖြစ်သူက လက်ရှိအခြေအနေတွင် အပြောင်းအလဲများစွာရှိသဖြင့် ဂျုံသီးနှံစိုက်ပျိုးထွက်ရှိနိုင်မှုမှာ မှန်းဆ၍ မရနိုင်သေးဘဲ ကုန်သည်အချို့ကမူ ယခုထက်ပိုမို၍ ထိခိုက်ဖွယ်ရှိသည်ဟု ရှုမြင်လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။
(ရင်းမြစ်- နယူးဒေလီမြို့ စီးပွားရေးသံမှူး‌ ပေးပို့သည့်သတင်း)
မလေးရှားနိုင်ငံ၏ ဧပြီလကုန် စားအုန်းဆီလက်ကျန်ပမာဏသည် ဇန်နဝါရီလနောက်ပိုင်း အများဆုံးအဖြစ် မြင့်တက်နိုင်သည်ဟု မေလ (၆)ရက် သောကြာနေ့ထုတ် Reuters သတင်းမီဒီယာ
စစ်တမ်းတွင် ခန့်မှန်းထားကြောင်း၊ ၎င်းမီဒီယာသည် စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းရှင်များ၊ ကုန်သည်များနှင့် လေ့လာဆန်းစစ်သူများကို မေးမြန်းထားသည့်စစ်တမ်းဖြစ်ကြောင်း၊ Malaysian Palm Oil Board (MPOB)က နောက်ဆုံးရကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များကို မေလ(၁၀)ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ပေးမည် ဖြစ်ပြီး ဧပြီလကုန် စားအုန်းဆီလက်ကျန်တန်ချိန်(၁.၅၅)သန်းရှိမည်ဟု စစ်တမ်းကခန့်မှန်းထားရာ မတ်လလက်ကျန်ထက် ၅.၂ % ပိုများကြောင်း၊ မလေးရှားနိုင်ငံက အင်ဒိုနီးရှား၊ ပါပူးဝါနယူးဂီနီ၊ စင်ကာပူ၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ဘီနင် အစရှိသည့်နိုင်ငံများထံမှ စားအုန်းဆီတင်သွင်းကြောင်း၊ စားအုန်းဆီတင်သွင်းသည့် ပမာဏကို အများဆုံးမှအနည်းဆုံးသို့တန်းစီပါက မလေးရှားနိုင်ငံက နံပတ်(၉)ဝန်းကျင်ရှိပြီး တင်ပို့မှုတွင် ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ရာ အကယ်၍ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံက စားအုန်းဆီတင်ပို့မှုများ လုံးဝပိတ်ပင် ထားသည့်မူဝါဒ ဆက်လက်ကျင့်သုံးနေပါက မလေးရှားက အင်ဒိုနီးရှား၏ အများဆုံးတင်ပို့သည့်နိုင်ငံ ပထမနေရာအားရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ စားအုန်းဆီဈေးနှုန်းမြင့်တက်သဖြင့် အိန္ဒိယနှင့်ဥရောပတို့ ဝယ်လိုအား အားပျော့နေသကဲ့သို့ တရုတ်နိုင်ငံတွင် ကိုဗစ်၁၉ Lockdown ချထားမှုများကြောင့် ဝယ်လိုအား ယုတ်လျော့နေပြီး အဝယ်မလိုက်မှုကြောင့် မလေးရှား စားအုန်းဆီတင်ပို့မှုများ လျော့ကျနေကြောင်း သိရှိရပါသည်။
(ရင်းမြစ်- Myanmar Food Guide Page မှ ရရှိသည့်သတင်း)
ရုရှား-ယူကရိန်းစစ်ပွဲကြောင့် နေကြာဆီတင်သွင်းမှုဈေးကွက် ပုံပျက်ယွင်းလျှက်ရှိပြီး အင်ဒို နီးရှားနိုင်ငံက ပြည်ပသို့ စားအုန်းဆီတင်သွင်းမှုအား တားမြစ်ပိတ်ပင်ခဲ့သည့်နောက် အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ စားသုံးဆီလုပ်ငန်းရှင်များသည် ပြည်တွင်းသို့ ကန်နိုလာမုံညင်းဆီ(canola oil)တင်သွင်းမှုအပေါ် လက်ရှိကောက်ခံနေသည့် အကောက်ခွန်နှုန်း ၃၈.၅ % မှ ၅.၅ % သို့လျှော့ချပေးရန် အစိုးရထံ စာ ရေးသားပေးပို့ခဲ့တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်း၊ စားသုံးဆီလုပ်ငန်းရှင်များက ၎င်းတို့အနေဖြင့် ပြည်တွင်း၌ စားသုံးဆီများ ရလွယ်နိုင်မှုကို အထောက်အကူပေးရန်နှင့် ဈေးနှုန်းတည်ငြိမ်ရေး ထိန်းသိမ်း‌ဆောင်ရွက် ရန်လိုလားလျှက်ရှိပြီး ရောင်းလိုအားအပိုင်း၌ ကန့်သတ်ချက်များရှိနေချိန်တွင် သွင်းကုန်အပေါ် ကောက်ခံသည့်အခွန်နှုန်းထားအား ပမာဏများစွာလျှော့ချ‌ပေးခြင်းကသာ ထိုသို့လုပ်ဆောင်နိုင်မည် ဖြစ်သည်ဟုပြောဆိုလျှက်ရှိကြကြောင်း၊အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းရှိ တမီနာဒူး၊အန္တာရာပရာ‌ဒေ့ရှ်၊ တဲလန်ဂါနာ နှင့် ကာနာတကာပြည်နယ်များ၌ နေကြာဆီကို စားဖိုဆောင်သုံးအဖြစ် အဓိကသုံးစွဲကြပြီး ရုရှား-ယူကရိန်းစစ်ပွဲဖြစ်ပွားမှုက ဈေးကွက်ကို ကုန်စည်ပေးသွင်းနိုင်မှုအပေါ်ဖိအားသက်ရောက်မှုရှိလာရာ အဆိုပါဒေသများ၌ လစဉ်နေကြာဆီတင်သွင်းရရှိနိုင်မှုကျဆင်းခဲ့သဖြင့် ၎င်းနေကြာဆီကို အစားထိုး သုံးစွဲနိုင်မည့် ဒုတိယမြောက်စားသုံးဆီကိုလက်ငင်းလိုအပ်လျှက်ရှိကြောင်း၊ထို့အပြင်အဆိုပါဒေသ များက စားသုံးများအနေဖြင့် ပဲပုတ်ဆီနှင့် ရိုးရိုးမုံညင်းဆီ(Mustard Oil)တို့ကိုနှစ်သက်မှုမရှိသဖြင့် ကန်နိုလာမုံညင်းဆီကသာ တစ်ခုတည်းသော အစားထိုးစားသုံးဆီဖြစ်သည်ဟု အိနိ္ဒယနိုင်ငံ‌တောင်ပိုင်း အခြေပြုစားသုံးဆီလုပ်ငန်းတစ်ခုကပြောကြားခဲ့ကြောင်း၊စားသုံးဆီဆိုင်ရာ အတိုင်ပင်ခံလုပ်ငန်းတစ်ခုမှ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကကန်နိုလာမုံညင်းစေ့ရိတ်သိမ်းရာသီမှာကုန်လွန်ခဲ့ပြီဖြစ်ရာအစိုးရကအကောက်ခွန်နှုန်းလျှော့ချပေးပါက ကန်နိုလာမုံညင်းဆီတင်သွင်းမှုဖြင့် ပြည်တွင်း‌ဈေးကွက်ဝယ်လိုအားကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ စားအုန်းဆီများတင်ပို့မှုကိုတားမြစ်ကြောင်း အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ကကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်ချိန်၌ စားသုံးဆီဈေးနှုန်းများမြင့်တက်ခဲ့ပြီး စားအုန်းဆီကြမ်းတင်ပို့မှုမှာ အကျုံးမဝင်ကြောင်းအင်ဒိုနီးရှားအစိုးရက ရှင်းလင်းချက်ထပ်မံထုတ်ပြန်မှုကြောင့် ဈေးနှုန်းအနည်းငယ် ပြန်ကျခဲ့သဖြင့်ကန်နိုလာမုံညင်းဆီများအား တိုးမြှင့်တင်သွင်းနိုင်ပါက ထို့ထက်ပို၍ ဈေးနှုန်းပြန်လည် ကျဆင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့ကြောင်း၊ စားသုံးဆီလုပ်ငန်းရှင်အချို့က အိန္ဒိအစိုးရသည် ပြည်တွင်းမုံညင်းဆီထုတ်လုပ်မှုအပေါ် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမည်ကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိနေရာ လုပ်ငန်းရှင် များအနေဖြင့် အိန္ဒိယ‌တောင်ပိုင်းဒေသရှိ ချိန်နိုင်း၊မန်ဂလော၊ခရစ်ရှ်နာပတ်နမ်နှင့်ကာကီနာဒါဆိပ်ကမ်း များမှသာ ကန်နိုလာမုံညင်းဆီများအား တင်သွင်ခွင့်ပြုရေးအစိုးရသို့တောင်းဆိုထားသည့်အပြင် စားသုံး သူများ လက်ငင်းသက်သာမှုရရှိစေရေးအတွက် စားအုန်းဆီကြမ်းတင်သွင်းမှုအပေါ် ကောက်ခံသော စိုက်ပျိုးရေးအခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးထပ်ဆောင်းအခွန် ၅% ကိုလည်း သုံညရာခိုင်နှုန်း သို့လျှော့ချပေးသင့်သည်ဟုပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
(ရင်းမြစ်-နယူးဒေလီမြို့ စီးပွားရေးသံမှူး‌ ပေးပို့သည့်သတင်း)
စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ၏ ၄၀% လုပ်ငန်းလျှော့ချရန်စီစဉ်နေ
ဘယ်လ်ဂျီယံရှိ စားသောက်ကုန် ထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီ/လုပ်ငန်းများ၏ ၄၀% က ၎င်းတို့ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို ယာယီရပ်တန့်ထားရန်(သို့) လျှော့ချသွားရန် စီစဉ်လျှက်ရှိသည်ဟု ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းအသင်းချုပ်(Fevia) က ပြောကြားခဲ့ကြောင်း၊ ဘယ်လ်ဂျီယံ နိုင်ငံရှိ စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများအနေဖြင့် ထုတ်လုပ်ရာတွင်လိုအပ်သည့် ဆီနှင့်ဂျုံမှုန့်ကဲ့သို့ သော ပါဝင်ပစ္စည်းကုန်ကြမ်း များ ပြတ်လပ်မှုကိုကြုံတွေ့နေရပြီး ယခင်နှစ်က ပန်းနှမ်းဆီတစ်တန်လျှင် ယူရို(၇၅၀)သာ ရရှိသော်လည်း ယခုအချိန်တွင် (၂၂၀၀)ခန့်ကုန်ကျမှုရှိနေရာ (၃)ဆနီးပါးမြင့်တက်လာ ကြောင်း၊ စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီများ၏ ၇၀% ခန့်မှာ ၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်များကို အပြောင်းအလဲပြုလုပ်ခြင်း(သို့)မကြာမီကာလတွင် ပြောင်းလဲခြင်းကိုပြုလုပ်ကြရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဘယ်လ်ဂျီယံအစိုးရအနေဖြင့် ကုန်ကြမ်းရရှိရန်ခက်ခဲ သည့် စားသောက်ကုန်ပါဝင်ပစ္စည်းများအတွက် အစားထိုးကုန်ကြမ်းများကို အသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုထားကြောင်း၊ လက်ရှိတွင် ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံရှိ စား သောက်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ၏ရှေ့အလားအလာနှင့်ပတ်သက်၍ကောင်းမွန်သည့်အခြေအနေမရှိ သော်လည်း ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်မူ စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းကဏ္ဍ ပြန်လည်နိုးထခဲ့ပြီး အဆိုပါကဏ္ဍမှ ဝင်ငွေ ယူရို(၆၁.၄) ဘီလီယံဖြင့် နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးတွင် မောင်းနှင်အားတစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့ရုံသာမက နိုင်ငံ လူဉီးရေ(၁)သိန်းခန့်ကိုအလုပ်အကိုင်များဖန်တီးပေးထားကြောင်း၊ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ၏စားသောက်ကုန် ထုတ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍသည် ကပ်ရောဂါ၏သက်ရောက်မှုဒဏ်မှ ပြန်လည်ရုန်းထလာခဲ့သော်လည်း ကပ်ရောဂါကြောင့်မြင့်တက်ခဲ့သည့်‌ ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်(Supply Chain)ကုန်ကျစရိတ်များသည် ရုရှား-ယူကရိန်းပဋိပက္ခကြောင့် ပိုမိုများပြားလာခဲ့ရာ အမြတ်အစွန်းရရှိမှုပိုင်းတွင် တိုးတက်လာခြင်း မရှိကြောင်း၊ စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းသည် စွမ်းအင်ပိုမိုသုံးစွဲရခြင်းဖြစ်ပြီး ရုရှား-ယူကရိန်း ပဋိပက္ခကြောင့် ဘယ်လ်ဂျီယံရှိ အဆိုပါလုပ်ငန်းများ၏ ၅၀ % ခန့်သည် စွမ်းအင်သုံးစွဲခ(၂)ဆ အထိ မြင့်တက်လာမှုကြုံရကြောင်း၊ ဘယ်လ်ဂျီယံ ရှိစူပါမားကတ်များအနေဖြင့် ဈေးနှုန်းတိုးမြှင့်ရေး ဆွေးနွေးမှုများကို ကာမိစေရေးအတွက် အခက်အခဲရှိသည်ဟု Fevia က ဖော်ပြခဲ့ကြောင်း၊ ဘယ်လ်ဂျီယံ ၏ စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းကဏ္ဍအနေဖြင့် စားသောက်ကုန်များတွင် တံဆိပ်ဖော်ပြမှု ဆိုင်ရာပြဌာန်း ချက်များ ပိုမိုဖြေလျှော့ပေးခြင်းအပါအဝင် အစိုးရ၏ထောက်ပံ့မှုများကိုတောင်းဆိုလျှက်ရှိကြရာ ထိုသို့ဖြေလျှော့ပေးခြင်းဖြင့် ကုန်ကြမ်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များကို သက်သာစေနိုင်ပြီး ကုန်ကြမ်း ရှားပါးမှုပြဿနာကိုလည်း ထိန်းညှိပေးနိုင်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
(ရင်းမြစ်-ဘရပ်ဆဲမြို့ စီးပွားရေးသံမှူး‌ ပေးပို့သည့်သတင်း)
စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနကဧပြီလနောက်ပိုင်းအထိ ဒီဇယ်ဆီအတွက် ထောက်ပံ့ပေးမည်
ထိုင်းအစိုးရအနေဖြင့် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသော စားသုံးသူများအား ကူညီရန် အတွက် ဧပြီလနောက်ပိုင်းအထိ ဒီဇယ်ဆီအတွက် အစိုးရ၏ထောက်ပံ့မှုအစီအစဉ်ကို ဆက်လက်လုပ် ဆောင်လိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး ထောက်ပံ့‌ကြေးမှာအကန့်အသတ်ရှိသည်ဟု စွမ်းအင်ဝန်ကြီးကပြောကြား ခဲ့ကြောင်း၊ အစိုးရအနေဖြင့် ဒီဇယ်ဆီ တစ်လီတာလျှင် ဘတ်ငွေ(၃၀)အထက်ဈေးနှုန်း၏ ထက်ဝက် ကေျာ်ထောက်ပံ့နိုင်သည်ဟုပြောကြားခဲ့ပြီး စက်သုံးဆီရန်ပုံငွေအားအသုံးပြု၍ တစ်လီတာလျှင် (၁၁.၂၁)ဘတ်နှုန်းဖြင့် ထောက်ပံ့ရေး အစီအမံ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ထောက်ပံ့ခဲ့ပြီး ဧပြီလကုန် အထိ ဒီဇယ်ဆီတစ်လီတာလျှင် ဘတ်ငွေ(၃၀) ဖြင့်ထိန်းထားရန်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိကြောင်း၊ ထိုင်း နိုင်ငံ၏ ဒီဇယ်ဆီစုစုပေါင်းသုံးစွဲမှုမှာ တစ်ရက်လျှင် လီတာ(၆၅)သန်းခန့်ရှိရာ ထိုအထဲတွင် ပရီမီယံ ဒီဇယ်ဆီသုံးစွဲမှုမှာ (၁.၄၁)သန်းဖြစ်ကြောင်း၊ အစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် ဘတ်ဂျတ်အသုံးစရိတ် သက်သာ စေရန်အတွက် ဇိမ်ခံကားများအသုံးပြုသည့် ပရီမီယံဒီဇယ်ဆီ‌ ထောက်ပံ့ကြေးကိုရုပ်သိမ်းကြောင်း မတ်လကုန်တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ၎င်းမှာဧပြီလမှစတင်၍သက်ရောက်မှုရှိကြောင်း၊ မေလတွင် အစိုးရ အနေဖြင့် ဒီဇယ်ဆီတစ်လီတာလျှင် ဘတ်ငွေ(၃၀)အထက်ဈေးနှုန်း၏ ထက်ဝက်ကေျာ်ကို ဆက်လက်၍ ထောက်ပံ့ပေးမည်လိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး စားသုံးသူများကိုကူညီရန်အတွက် နောက်ထပ်အစီအမံများအား ရှာဖွေရန် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနအားတာဝန်ပေးအပ်ထား‌ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
(ရင်းမြစ်-ဘန်ကောက်မြို့ စီးပွားရေးသံမှူး‌ ပေးပို့သည့်သတင်း)